နေ့: မေလ 30 2013
cable ကိုကားတစ်စီး၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများ၏ Giresun Castle သတင်းများအရဆက်လက် - Giresun Castle Cable ကိုကား Giresun ပြုလုပ်ခြင်းသည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု Continues ။ Giresun အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Dursun လီ Sahin, စီမံကိန်းတာဝန်ရှိသူများလမ်းလျှောက်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့တယ်။ cable ကိုကားတစ်စီးစီး၏စုစုပေါင်းအရှည် 280 [ပို ... ]
Ltd. , ထုတ်လုပ်မှုစက်စက်မှုလက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်အတွက်စေ့စပ်တူရကီမီးရထား TCDD လှည်းအတွက် Sivas, (TÜDEMSAŞ) စက်ရုံတွင်ဝန်ထမ်းများ 32 နှစ်အရွယ်ကဒါဖီGülmezအတွက်ကန်ထရိုက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း, လှည်းပြုပြင်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပေါ်သို့ကျသွား၏ရလဒ်အနိစ္စရောက်လေ၏။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်း၌ထိုင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း, လက်ထပ်နှင့်ကလေးများရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်3[ပို ... ]
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဗဟိုအားဖြင့်စီစဉ်ထားရပါမည်အစ္စတန်ဘူလ် 20 သန်းပြည်သူ့အင်အားလိုအပ်တာလဲ
နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကိုမေလ 21 2013 အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်ဌာနများတွင် "ဗဟိုကမ်းခြေ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်နယ်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးပိုင်ခွင့်" ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကွန်ဖရခေါ်ဆိုခအဆိုပါအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်တက္ကသိုလ်နှင့်နိုင်ငံတကာပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Service Providers အသင်း (UTIKAD) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု [ပို ... ]
TPC Tokat - ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်များအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရမှ Niksar လမ်းဖက်စပ်နှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
TPC Tokat - Niksar imzalandı.tcအဝေးပြေး (TCK) နဲ့အနိုင်ရတဲ့ဖက်စပ်စာချုပ်အဘို့အလမ်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ, Programs ကို၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုနှင့်ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် "Tokat - Niksar အဝေးပြေးကီလိုမီတာ:0+ 000-48 962 ဖြတ်၏ + ဆောက်လုပ်ရေး" ဟုအဆိုပါဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်း အသစ်က [ပို ... ]
TPC Trabzon - Ashkali လမ်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါရလဒ်
TPC Trabzon - Aşkaleလမ်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါsonuçlandı.tcအဝေးပြေး (TCK), Programs ကို၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုများနှင့်ဦးစီးဌာနနှင့် 02 စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း "Trabzon, မေလ 2013 အတွက်လေလံစုဆောင်း - Aşkaleလမ်းမကြီး (Kösterချောင်း - Gumushane လူငယ်များသို့) မိုင်အကွာအဝေး: 65 + 200 - [ပို ... ]
နာကျင်မှု - မုန့်စိမ်း - Tutak - လျှောက်လွှာ၏ Patnos လမ်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ preselecting အားဖြင့်ကောက်ယူခဲ့သည်
နာကျင်မှု - မုန့်စိမ်း - Tutak - စုဆောင်းဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါ၏ preselection လျှောက်ထား၏ Patnos နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး (TCK), အထွေထွေ Programs ကိုညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့်သမ္မတအားဖြင့်ကျင်းပမည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအေဂျင်စီ, "နာကျင်မှု-မုန့်စိမ်း - Tutak - Patnos အဝေးပြေးကီလိုမီတာ: [ပို ... ]
Manavgat - Alanya လမ်းဆုံ - Akseki -3။ တိုင်းဒေသကြီးနယ်စပ်ရေးရာလမ်းကြောင်းကိုလေ့လာမှုများနှင့်စီမံကိန်းများကိုကုမ္ပဏီ Yuksel Domanic များအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရ
Manavgat - Alanya လမ်းဆုံ - Akseki -3။ တိုင်းဒေသကြီးနယ်စပ်ရေးရာလမ်းစီမံကိန်းအတွက်လေ့လာမှုများနှင့်ကုမ္ပဏီ Yuksel Domanic kazandı.tcအဝေးပြေး (TCK) ဘဏ္ဍာရေးစာအိတ်မေလ 07 2013 အတွက်ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေအားဖြင့်ဖွင့်လှစ်, "(Manavgat - Alanya) ၏ဝယ်ယူရေး Split ကို [ပို ... ]
TPC 12 ။ Erzurum အနောက်တိုင်း Ring ကိုလမ်းမစီမံကိန်း
TPC 12 ။ အနောက် Ring ကိုလမ်းမစီမံကိန်း Erzurum ဒေသဆိုင်ရာလေ့လာရေးစီမံကိန်းကိုအင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုစာချုပ် Epro အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုကနှင့်အတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးနုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး (TCK) 12 ။ စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများ: ဧပြီလ 19 2013 ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု "Erzurum အနောက်တိုင်း Ring ကိုလမ်းမ (+0000 11-441 + ကီလိုမီတာ), ဟာယပူဇော်သက္ကာအတွက်စုဆောင်း [ပို ... ]
Antalya ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကို '' Metrobus အကြံပြု
Antalya ရဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကို '' Metrobus အကြံပြု: Antalya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်နှင့်အတိုင်ပင်ခံပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉျ Erhan အနောက်မြောက်ဘက်ရှိDöşemealtiစီးသည်ဇာတိမှာ Aksu အားဖြင့်အရှေ့metrobüslရထားလမ်းစနစ်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်ဟုပြောသည်။ Antalya ပို့ဆောင်ရေး Master Plan ကိုပို့ဆောင်ရေးအစီအစဉျ Erhan ရှေ့ဆောငျမြားပြင်ဆင်နေ, [ပို ... ]
Siemens ကနေရေရှည်တည်တံ့မြို့ရွာတို့အဘို့အသိဉာဏျသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ: အသိဉာဏ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များအတွက်မြို့ကြီးများကိုကျော်တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 900 နှင့်အတူ၎င်း၏အထူးပြုအသွားအလာအင်ဂျင်နီယာ Know-ဘယ်လိုနှင့်အတူ, Siemens Intertraffic အစ္စတန်ဘူလ် 2013 တရားမျှတသောမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကမ္ဘာကြီးအတွက်ဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်တည်စေ။ နောက်ဆုံး [ပို ... ]
ယနေ့ငါရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်အများဆုံးလျင်မြန်စွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရထားတဦးတိုးမြှင့်ပိုအချက်များကြွလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သကဲ့သို့ငါဘာမှမမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ ဤအကြောင်းကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ, အဓိကအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်တည်နေရာ၏ပြဌာန်းခွင့်အတွက်အကောင့်ဟာမတူကွဲပြားမှုများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှထပ်ပြောသည်။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်တူရကီအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အနောက်နိုင်ငံများဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
ရုရှားကပထမဦးဆုံးမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းမော်စကို-ကာဇန်နှင့်မော်စကို-Adler ၏တင်သောအကြားရုရှားနိုင်ငံရဲ့အမြန်ဆုံးရထားအတွက်ဖြည့်ဆည်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ တစ်နှစ် 2018 အားဖြင့်ပြီးစီးစေခြင်းငှါဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ပေးသောစီမံကိန်း, မော်စကို-ကာဇန်ယခု မှစ. 11,5 နာရီ 3,5 နာရီအတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ရုရှားပြည်နယ် [ပို ... ]
PHC ကိုထံမှမြေ၏ရောင်းချမှ TCDD ခွင့်ပြုချက်
ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဘဏ္ဍာရေးဘဏ္ဍာရေး Aydin, Erzurum, Mardin နှင့် Tunceli ပြည်နယ်အိမ်ခြံမြေရောင်းအတည်ပြုမှတ်ပုံတင် TCDD အစ္စတန်ဘူလ် / Esenyurt အိမ်ခြံမြေ၏နာမ၌မှတ်ပုံတင်ထား PHC ကို TCDD အမြင့်ကောင်စီ (PHC ကို) မှပွညျသူပွညျသားရောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါတရားဝင်ပြန်တမ်းထဲမှာထုတ်ဝေ PHC ကိုဆုံးဖြတ်ချက်အရ, [ပို ... ]
TCDD အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆုကို Honoree
TCDD အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆုပို့ဆောင်ရေးလက်ခံတွေ့ဆုံ, TCDD အဆိုပါရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်သည့်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့, İZBANစီမံကိန်းကိုအရည်အသွေးကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည့်စနစ်ဖြစ်သောကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆင်ခြေဖုံး၏အရှည်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကမ္ဘာ့ဖလား [ပို ... ]
RayHaber 30.05.2013 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
Hatlar arasındaki yarmanın zamin stabilitesinin sağlanması işi yaptırılacaktır Tünel altgeçit ve yol inşaatı yaptırılacaktır IRR yolcu vagonları için anons sistemi alımı (TÜVASAŞ) Benzer Demiryolu Haberleri ve İlginizi Çekebilecek Diğer HaberlerRayHaber 02.01.2013 İhale Bülteni 02/01/2013 Baga [ပို ... ]
Derince ဆိပ်ကမ်းပုဂ္ဂလိကပိုင်အဆင့်မြင့်ကောင်စီများအတွက်ဇုန်အပြောင်းအလဲများအချို့ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအစီအစဉ်အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. ပုဂ္ဂလိကပိုင်အစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတရားဝင်ပြန်တမ်းထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ Kocaeli စုစုပေါင်း 967 900,75 အတွက်အဘုတ်အဖွဲ့ဟာ Derince ဆိပ်ကမ်းကိုပါဝင်တဲ့မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၏တထောင်စတုရန်းမီတာ [ပို ... ]
3 ။ အဆုံးကနေစျေးကြီးမှလေဆိပ်ခရီးသည်
Pegasus sertac haybat ၏အထွေထွေမန်နေဂျာကနေခရီးသည်ပျံသန်းဖို့စျေးကြီးတဲ့လေဆိပ်, Ataturk လေဆိပ်အတွက်အခွန် 28 ပေါင်, သစ်ကိုလေဆိပ်တတိယအတွက် 48 ပေါင်တိုးလာလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ Haybat "ခရီးသည်များပျံသန်းဖို့ကပိုစျေးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်" ဟုသူကပြောသည်။ အကြမ်းဖျင်းအတွက် Pegasus လေကြောင်းလိုင်း, [ပို ... ]
Cemal Yaman Adaraan ကနေပံ့ပိုးမှု
Adaraan ပံ့ပိုးမှုမီးရထားအလုပ်သမားများပြည်ထောင်စုဌာနခွဲကသမ္မတ Cemal Yaman Sakarya ထံမှ Cemal Yaman, Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ထောက်ခံမှုပေးခဲ့တယ်မြို့ပြရထားပို့ဆောင်ရေးစနစ်စီမံကိန်း (ADARAY) ကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Sakarya မြို့တော်ဝန် Zeki Toçoğluမစ္စတာ Cemal Yaman, မီးရထားအလုပ်သမားများပြည်ထောင်စု [ပို ... ]
ray Refresh Bismild ရထားစစ်ဆင်ရေး (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
ပြုပြင်မှုများ၏ Diyarbakir Bismil ပေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Vehbi ကြေးနီ,5၏အလယ်ဗဟိုတွင်စတင် Bismild ရထားရထားရထားလိုင်းကို၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ Bismil ခရိုင်အရာရှိများနှင့်တပ်တပ်မှူးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ယင်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲမှာစကားပြောသောပဌနာ Bismil ဘူတာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Oktay Muaz နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီး; လမ်း [ပို ... ]
Bursa အမြင့်မြန်နှုန်းရထားဘူတာGürsulu၏ Cancellation မှတုံ့ပြန်မှုအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားဘူတာရုံ Gursu ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းများအတွက်Gürsuluစိတ်ဆိုးကြသည်။ အဆိုပါသတ္တမ Faruk Özcan Mutlu လူမှုဗေဒပညာရှင်နှင့်မြို့ပြ Institute နှငျ့Çinar 19 ၏ဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံGürsuGÜSABစီမံခန့်ခွဲမှု [ပို ... ]